भान्सा छोएको भन्दै दलित बालकमाथि निर्मम कुटपिट – mero sathi tv
On ८ चैत्र २०७४, बिहीबार ०५:०७
स्थानीय वरडाँडा विद्यालयमा कक्षा ३ मा अध्ययरत भीमबहादुरले साथीको घरभित्र पस्दा कुटाइ खानुपर्ला भन्ने कल्पना नै गरेका थिएनन् । तर स्थानीय बाटु शाही र उनका छोरा भरतले भान्सामा दलितले छोएको भन्दै आफूमाथि कुटपिट गरेको भीमबहादुरले बताए । शरीरको घाउ देखाउँदै उनले भने, ‘मलाई चक्रले घरभित्र पठायो, बाहिर आउँदा किन भान्सामा छोएको ? भन्दै उसका आफन्तले कुटे ।
मलाई खोलामा लगेर कुटपिट गरे, बेहोस भएपछि घरमा ल्याएर फालेछन् ।’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन आएकी जैसरा विकले परिवार नै मिलेर आफ्नो छोरामाथि कुटपिट गरिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘म गोठालो गएकी थिएँ, दिउँसो घरमा आउँदा छोरो थिएन । खोज्दै जाँदा बेहोस अवस्थामा फेला पारेँ, कुटपिट गरेर बेहोस भएपछि उनीहरूले आफ्नै घरभित्र लुकाएछन् ।’
दलितले भान्सा छोएको भन्दै निर्मम ढंगले छोरामाथि कुटपिट गरिएको उनको भनाइ छ । ‘आजसम्म मिलेर बसेका थियौं, आफ्नै छिमेकीले यस्तो गर्लान् भन्ने सोचेकी पनि थिइनँ’, उनले थपिन्, ‘दलित भएकै कारण हामीले कति पीडा सहने ? अब दोषीलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । गाउँमै मिलाउन खोजेका थिए, म न्याय माग्दै सदरमुकाम आएकी हुँ ।’ पीडित बालकका मामा जगदीश विकले जातकै आधारमा आफुहरुमाथि विभेद गरिएको बताए ।
आरोपित बाटुले भने आफूले नभई आफ्नो छोराले मात्र कुटेको दाबी गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘दलित हाम्रो घरभित्र पस्दा छोरालाई देउता आयो, शरीरमा देउता चढेपछि छोरोले नै यसलाई कुटेको हो । म घरदेखि केही टाडा थिएँ, मैले उसलाई छोएको छैन ।’ घरभित्र पसेर भान्सामा छोएपछि छोरोले कुटेको उनले स्वीकार गरिन् । घटनाबारे ढिला मात्र जानकारी प्राप्त भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।